R/Wasaare Kheyre “Haddii dadkeenna dalkaan usoo dhibaatoobay oo xorriyadda nagu wareejiyay aanan qiimeyn macnaheedu waxa ay tahay in dalka aanan qiimeyn” | BRA
R/Wasaare Kheyre “Haddii dadkeenna dalkaan usoo dhibaatoobay oo xorriyadda nagu wareejiyay aanan qiimeyn macnaheedu waxa ay tahay in dalka aanan qiimeyn”
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay qaar kamid ah dhallinyarada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa ballan qaaday in dowladdu ay wax ka qaybaneyso baahiyaha garoonka kubbadda cagta Cabdullaahi Ciise.
Dhismaha garoonka kubadda Cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo, ayuu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay in lagu maamuusayo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Ciise oo kamid ahaa halgamayaashii dhaliyay xornimada dalka.
“Garoonka waxaa loogu magac daray halyaay Soomaaliyeed. Haddii dadka xornimada dhaliyay aan qiimeyn wayno macnaheedu wax ay tahay in dalka aan qiimeyn waynay, marka waa muhiim meesha Allaha u naxariistee Cabdullaahi Ciise uu ku magacaabanyahay in la qurxiyo oo la wayneeyo”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa bulshada Soomaaliyeed ku booriyay in aysan sugin dowladda kaliya ee iyagu ay bilaabaan dib-u-dhiska iyo horumarinta dalka.